Ngaba i-Wiki iLifa eliLungileyo leeMntu? - Impendulo yeSmalt
I-Wikipedia okanye i-Wiki yincwadi eyaziwayo yamahhala e-intanethi, enamaqela angaphezu kwezigidi ezingama-36 kwiilwimi ezahlukeneyo ezingama-250. Okwangoku, sele ibe yinto ephezulu kunye nenokuthenjwa yenkcazelo kwi-intanethi. U-Ivan Konovalov, u-8 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi i-English Wikipedia yodwa inamaphepha angaphezu kwezigidi ezintlanu kwaye iyindawo yesithandathu evakatyeleleyo kwihlabathi. Ngaphambi kokudalwa kwe-Wikipedia, umthombo omkhulu wolwazi yiYongle Encyclopedia, ekuthiwa iqulethe imiqulu engama-22 935 - hosting ?cretsiz. Xa uJimmy Wales wamisa lewebhu ngowe-2001, inguqulelo ye-Wikipedia yokuqala yayifumaneka kuwo wonke umntu emnatha. Namhlanje, unabantu abangaphezu kwesiqingatha sezigidi ezivakashela iphepha le-Wikipedia rhoqo ngenyanga. Amavolontiya abangaphezu kwama-80,000 ahlahlela amaphepha alo rhoqo, kwaye abantu abaninzi abazange bazi i-intanethi ngaphandle kwe-Wikipedia edibene namanye amawebhusayithi kunye neeblogi kwinani elikhulu.
Ootitshala, abaphandi, intatheli, abafundi kunye nabaqeqeshi bezonyango bancike kwi-Wikipedia kuba ulwazi olubekwe kule ndawo luhlala luchanekile. Sinokukhangela phantse zonke izihloko kule ncyclopedia, kwaye iingcali zisetyenzisile idatha yayo yokuqikelela izinto ezivela kwifilimu ze-blockbuster kwiirhafu zokutshintshwa kwempahla..Ngexesha, abalobi abahlukahlukeneyo kunye nabahleli beze phambili bahlela amakhasi e-Wikipedia ngeelwimi ezininzi. Abasebenzi baseburhulumenteni, abapolitiko, abadlali kunye nazo zonke iintlobo zabantu basebenzisa njengomthombo oyintloko wolwazi kwi-intanethi. Nokuba inkunzi ye-IBM intloko eyenziwe ngaphezulu kwama-47,000 amagama aquka 'iifowuni ze - Wikipedia i-website efanelekileyo kakhulu.
Ngokungafani neGoogle, i-Facebook kunye ne-Apple, i-Wikipedia ayikho inzuzo enkulu ye-intanethi. Ngokomzekelo, i-Apple Inc ibhale inzuzo engcono kakhulu nangaphezulu kunazo zonke kwimbali yenkampani kwaye iphumelele ukunyaniseka kwabaxhasi behlabathi ngenxa yeenkonzo zayo ezicwangcisiweyo kunye nemveliso. Ngakolunye uhlangothi, i-Wikipedia ibilokhu ihlala yinto engekho-frills kunye newebhusayithi ecacileyo eninzi amanqaku atyhicilelwe imihla ngemihla. Le encyclopedia eqhutywe ngevolontiya isebenza njengenhlangano enkulu engenzi nzuzo ehlabathini, ekhoyo ngenxa yeminikelo evela kuluntu jikelele. I-Wikipedia isoloko isetyenzisile iirekhodi ezintsha kwaye ivelise izimvo ezintsha zentengiso ngephepha layo elixhasiweyo kunye nezonxibelelwano.
Nangona abadali be-Wikipedia abazifunanga nzuzo nayiphi na inzuzo, iphazamise imirhumo yamashishini kunye neentlalo zentlalo kwiinyanga ezizayo, ukusuka kwimfundo yesikolo ukuya kupapashwa kwamanqaku. I-Wikipedia isoloko ityholwa ngokutshabalalisa imodeli yezoqoqosho, kwaye inetyala lokususa iinkcukacha ezidlulileyo kunye nokunika indawo ukuhlaziywa kolwazi.
Kubalulekile ukuba i-Wikipedia igxininise ngokuchanekileyo kwaye kufuneka ihlale ifanelekileyo kuwo onke amaxesha. Ngokuqinisekileyo, i-Wikipedia yatshintshile indlela esicinga ngayo amanqaku kwi-intanethi, kodwa isineentsilelo ezininzi. Ukulungelelanisa iteknoloji yeselula kufuneka ibe yinto ephambili kuyo kuba abaninzi abantu basebenzisa amadivayisi eselula ukufikelela kwi-intanethi. Ukuba i-Wikipedia ifuna ukufezekisa iinjongo ezifunwayo, kufuneka iyenze ifikeleleke kuzo zonke izixhobo nakuzo zonke iilwimi. Kwiminyaka elishumi elinesihlanu nje, i-Wikipedia ibe yinto enobungcono kunye nenzame enkulu yokusebenzisana kwabantu.